Galkaio City, Somalia, August 24 2004
Col. Abdullahi Aduunka Ma Nala Arkay
Galkaio City, Somalia, August 24 2004 - Somali Peace Rally - Waxaa ummadda Puntland oo ahayd beelo nabad ku wada nool wixii ka horreyey 1998, waxaase qabsatay dhibaato aan la wada ogayn. Waxaa la yaab leh in in badani reer Puntland u qabaan inay ku waareen nabad, horumar iyo wanaag adduun. Waxaase runtu tahay inaan midna intaas ka jirin carrada loo yaqaan Puntland, ayna u sii dheertahay fashal bulsho dhan kasta, gaar ahaan dhanka hoggaanka dhaqanka iyo anshaxa bulshada.
Masiibada qabsatay reer Puntland waxaa magaceeda la yiraahdaa ANIGA. Waa Kornayl raba inuu ummadda neefta u qaybiyo. Waxaa lagu eedayn jiray diktatoorkii Somaliya rogay inuu isku dayi jiray in ummaddu waydo waxay cuntu markaasna asaga waydiisato cunto kana siisato daacadnimo. Kornaylku wuxuu ku dhow yahay inuu yiraahdo reer Puntland waxaan idiin qaybin neefta aad neefsataan, wax walbana waa aniga, anigaa iri, anigaa leh, anigaa amray, anigaa jecel, aniguu I xigaa, aniguu I jecelyahay.
Waxaa cad inaan Somali badani iyo ajnabiba aan la wada aqoon Cabdullahi. In door ah oo leh wuxuu dalka ku soo rogi karaa deganaansho baad arkin, waxaad arkin in leh waa nin fir-fircoon deganaasho keeni kara. Waa dhab in maanta Somalia u baahan tahay degaanaansho, waxaanse la isweydiin in Somali u baahan tahay nin naftiisa wax walba u bar-bardhigaya, haddii uu iska arki waayo, sidii muraayadiinna, dummbe la dhacaya. Somali badan oon hore u aqoon baa dhawaan ku baratay. Waxaa dhacday in kharajkii ummadda Puntland (oo hadda Booliskeedii suuqa kala galay oo tuugtii laga garan waayey) loogu talo galay in loogu adeego in uu bur-bursaday, hantidii ummaddana ka dhigtay wax uu guryo waaweyn dibedda uga gatay iyo wax uu is yiri Somalida rafaadsan madaxweyne-nimo uga gado.
Habeynkii bishn Agoosto ahayd 21ka (20040 waxaa 6 wasiir ee Igad ka tirsani u yeertay Cabdullahi iyo saddex siyaasi ee reer Puntland ah, waa labada dhinac ee isku hayey liiska baarlamaanka beesha Harti. Waa diiday Cabdullaahi inuu hor fariisto siyaasiyiintii ay iska soo horjeedeen ee ahaa Galaydh, Jamac Cali Jama iyo Casha Cabdalla. Ugu dambayn waxaa wasiirradii u suurtogashay inay la kulmaan Cabdullahi gaarkiisa. Wax walba ee loo soo jeedshay waa diiday, waxaana ka soo hartay, ANIGA, waxaan ahay madaxweyne DGPL, aniga waa la idoortay, anigu dadkaan lama mid ahi. Waxaa meel dheer gaari waayey dooddii wasiirrada oo ahayd, waxaan go'aaminnay in hab beeleed wax lagu qaybsado. Ugu dambayn waxaa madashii isaga kacay afar wasiir (ilaha qaar waxay leeyihiin shan baa iskaga kacday miiskii), waxaana loo reebay wasiirkii Itoobiya inuu afgarto Kornaylka ayaga ku dhawaan jiray. Isma aysan afgaran xitaa Mr. Siyuum oo hore u ja-jabnaan jiray Kornaylka.
Waxaa in badan SPR ku cel-celisay gobollada Puntland waxaa haysata dhibaato aan la wada ogayn, waa ilaah mahaddiis hadduu maanta ay soo shaac baxay xaalka Cabdullaahi uuna yahay, Habar Jeceleey, Muuse waa kaa. Waa ilaah mahaddii in badan oo hore Cabdullahi u taageertay inay maanta haaramayaan ka dib markay soo taabteen dunta kornaylka oo ah sun iyo boog, waalli caad ee aan miyir qabin.
Faafin: SomaliTalk.com | August Aug 24, 2004